offline browser software - MYSTERY ZILLION
May 2009 edited May 2010 in Web Base
သူလည်းပိတ်သွားရော...online မှာ စာဖတ်နေတဲ ့အချိန်ဆို..အားကြီးဆိုးတာဂျာ...
အဲဒါနဲ ့..ဒီsoftware လေးတွေ...ရတော ့မှ..ပဲ..အဆင်ပြေသွားတယ်...သုံးကြည် ့နော်...
Software က..နှစ်ခုပါပါတယ်...တစ်မျိုးမကြိုက်ရင်..နောက်တစ်မျိုး...သုံးပေါ ့နော်..
ကိုဇူး mediafire က နေတင်ပေးပါလား
ifile က file expired ပြနေပြီ
အစ်ကိုရေ .....ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ ပြောပြပါလား ။ ကျွန်တော်က အိမ်မှာမချိတ်ထားပေမဲ. အစ်ကိုပြောတာ စိတ်၀င်စားလို.ပါ ။
ဟုတ်တယ်ဗျို့.. expired တဲ့ဗျ နောက်တစ်ခုမှာထပ်တင်ပေးပါနော်
offline browser ပဲဗျ။ အပေါ်ကဟာလား? ဘာလား တော့သိဘူး။ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
ကိုနော်ရေ ကျေးဇူးဗျို ့...အနော် အစားဖြေရှင်းပေးတာ။ မဖတ်တာကြာသွားရို ့ပါ။ :d